Indaba Yempumelelo - Umagazini i- "Potato System"
main Isihloko Indaba Yempumelelo
Ngo-2017, i-Uralsky Potato Seed Breeding Company yasungulwa eSverdlovsk Region. Abahlanganyeli ekwakhiweni kwenkampani kwakungu-AO APK "Belorechensky" no ...
I-Agroholding "Dary Malinovki" yasungulwa ngonyaka we-2013, imisebenzi emikhulu ukukhiqizwa kwamazambane embewu, ukutshalwa nokucutshungulwa kwamazambane nemifino ...
I-LLC "i-Agrico Eurasia" ingummeleli osemthethweni wenhlangano yaseDashi "u-Agrico Holland" endaweni yeRussian Federation, iRiphabhlikhi yaseBelarus neRiphabhliki yaseKazakhstan. “I-Agrico ...
ILorenz Snack-World iyinkampani yomndeni ezimele, engomunye wabaholi emakethe yokudla okulula yaseYurophu. Ikhiqiza futhi ithengise ama-chips, ama-straw anosawoti ...
I-LLC "amazambane eZolskiy" yasungulwa ngo-2011, inkampani igxile ekukhuleni amazambane okudla kanye nembewu yemikhiqizo ephezulu. Umsebenzi uyaqhubeka e ...
Inkampani "Razdolye" LLC yasungulwa ngonyaka we-2008, kepha yathola umzuliswano omusha entuthukweni ngo-2015 ngokufika kwentsha ...
Abakhiqizi abavela ngaphandle kwaseMoscow babamba iqhaza emncintiswaneni wokuqala kazwelonke "Okuthandwa yiRussia-2020". Phakathi kwemikhiqizo eyethulwe kukhona iDmitrovsky Potato. Umncintiswano kazwelonke wemikhiqizo yesifunda ...
Esigabeni esithi "Indaba Yempumelelo", ingosi ye-Intanethi yomagazini i- "Potato System" ngokwesiko ishicilela izinto eziphathelene namabhizinisi imisebenzi yawo ihlobene nokukhula kwamazambane. Kepha namhlanje ...
Lesi sitshalo sigxile ekukhiqizeni amafries aseFrance namazambane agobekayo. Umthamo womklamo - amathani ayizinkulungwane ezingama-20 emikhiqizo eqediwe ...
Ngokusemthethweni, ama-Pringles chips abizwa ngokuthi amakhukhi isikhathi eside, ngoba okuqukethwe amazambane kuwo kuphansi - kungama-42% kuphela, okusele kuyimpuphu ...